Faa’iidada Caafimaadka Ilkaha. | Hargeysa World-Herald
Home City Pages Faa’iidada Caafimaadka Ilkaha.
Marka laga yimaado qosolka, dhoolacadaynta, hadalka, afka iyo ilkuhu waxay waxay inoo qabtaan shaqooyin badan. Ilkaha iyo candhuuftu waxay ridqaan oo ay qooyaan cuntada, waxayna ka dhigaan mid fudud in la liqo ayna calooshu si’ dhakhso ah u sii ridiqdo. Ilkuhu waxay taageero iyo qurux u yihiin cirridka. Afka iyo cunaha waxaa ku badan unugyada difaaca oo la dagaalama xanuun dhaliyayaasha . ilaalinta caafimaadka ilkaha iyo afku waxa uu horseed buuxa u yahay caafimaadkeena.
Bakteeriyadu sideedaba waxay ku nooshahay afka, bacteeriyadu waxay soo daysaa asiidh marka ay quudanayso hadhaaga cuntada. Asiidhaasi waxay xoqaysaa iliga, taas oo aakhirka keenaysa in uu samaysmo god. Suusku waa caabuq ku dhaca ilkaha, kadib markii ay asiidha afku xoqdo iliga.
Suusku waa xanuunka ilkaha ee ugubadn somalida kaas oo inta badan haleela da’aada u dhaxaysa 10 il 25 jirka. Sababtoo ah waxaa inagu badan isticmalka cuntooyinka ay ku badantahay sonkartu. Habka Nadaafadinta ilkuhuna way liidataa.